August 27, 2011	ब्यांककदेखि नोमपेन्हसम्म: क्रान्ति, द‌ङ्गा र ठुल्दाई	‘म तपाईंलाई केही देखाउन चाहन्छु’ भन्दै ती आफ्नो मोबाइल फोन खेलाउन थाले । मोबाइलमा उनले केही तस्बिर देखाए जसमध्ये एउटामा नेपाल, ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियाका झन्डाहरू थिए । तिनको मुनि प्रश्नचिन्हयुक्त एउटा रातो झन्डा थियो जसका मुनि थाईमा केही लेखिएको थियो । ‘यो प्रश्नचिन्ह भएको झन्डा थाइल्यान्डको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ तिनले भने । इमेलमार्फत त्यो तस्बिर पठाउँदा आफू पक्रिइन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले ब्लुटुथमार्फत त्यसलाई मेरो फोनमा पठाए । ‘तपाईंहरूले कसरी गर्नुभयो ?’ उनले फेरि सोधे, ‘क्रान्ति कसरी भयो ? राजा कसरी फाल्नुभयो ?’
Posted in UncategorizedTagged क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड, नोमपेन्ह, ब्यांककBy Dinesh WagleLeaveacomment	Please post your thoughts. (कृपया तपाईंलाई लागेको लेख्नुस् ।) Cancel reply	Enter your comment here...
← Wakefulness (via WSJ)ब्यांककदेखि नोमपेन्हसम्म: क्रान्ति, द‌ङ्गा र ठुल्दाई →